လက်ကား KD-BC-8H အပြည့်အစုံ စတော့ခ်ပါသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စက်ကိရိယာ ကြော်ငြာ အသံလွှင့်စက် ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပေးသွင်းသူ |ကြင်နာသောကွန်ရက်
KD-BC-8H အပြည့်တင်ထားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ပစ္စည်း ကြော်ငြာ အသံလွှင့်စက်
1. အသံလွှင့်အဆင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ HD ကူးပြောင်းခြင်း ဘူတာရုံ;
2၊ Built-in ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောနှော၊ အန်နာ ရောနှော နှင့် အသံ ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှု ကိရိယာ၊
3. TS-MPEG2 အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားသော MIC/TF ကတ် သိုလှောင်မှု။
5. ခေါ်ဆိုမှုနှင့် Tally စနစ်အား လမ်းညွှန်ပါ။
6. HD ထည့်သွင်းမှု မျက်နှာပြင် 4၊ HD အထွက် မျက်နှာပြင်2မျက်နှာပြင် PVW/PGM;
7. ကင်မရာ PTZ ထိန်းချုပ်မှု၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်အနေအထား ထိန်းချုပ်မှု၊ အဖြူရောင်ချိန်ခွင်လျှာ ချိန်ညှိမှု၊ အလင်းဝင်ပေါက် ချိန်ညှိမှု စသည်
8. SDI အဝင်အင်တာဖေ့စ်တွင် ကင်မရာပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကာကွယ်မှုတို့ပါရှိပြီး SDI ဗီဒီယို၊ အသံ၊ PTZ ထိန်းချုပ်မှု၊ TALLY နှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုတို့ကို ထုတ်လွှင့်ရန် 75-ω coaxial ကေဘယ်လ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
9. အပလီကေးရှင်း- စတူဒီယို၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် ဘူတာရုံပေါင်းစုံ အသံသွင်းခြင်း၊ ပညာရေး အသံသွင်းခြင်း၊ မီဒီယာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများနှင့် လှုပ်ရှားမှု အမျိုးမျိုးတို့ကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊
10. အရွယ်အစား- 440mm×360mm×150mm (စခရင်ပိတ်) 290mm (စခရင်ဖွင့်ခြင်း);အလေးချိန်:6ကီလိုဂရမ်ခန့်;
Alibaba တွင် KD-BC-8H ကိုမှာယူရန် နှိပ်ပါ။
အလေးချိန်6ကီလိုဂရမ်
ဗီဒီယိုအထွက် PGM အထွက်၊ HDMI × 2,3G-SDI × 2; PVW အထွက်၊ HDMI × 1,3G-SDI × 1
အသံထွက် RCA×5၊MIC XLR×5 တွင် စတီရီယို (L,R)
အသံထွက် စတီရီယို (L၊R) ထွက် RCA×1၊Balanced XLR OUT×2၊Monitor3.5×1၊Playback monitor3.5×1၊ဒါရိုက်တာက MIC3.5×2 ဟုခေါ်သည်
အခြား interface RJ45×1၊USB×2၊TF×1၊WIFI
ဗီဒီယိုခလုတ် ဟာ့ဒ်ဝဲခလုတ်အချက်ပြ× 8(1920×1080)
အသံရောစပ်ခြင်း။ ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောနှောကိရိယာ×၅၊ အင်နာလော့ ရောနှော×၅၊ အော်ဒီယို ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှု ကိရိယာ×၁
ထုတ်လွှင့်မှုနှောင့်နှေးခြင်း။ အသံနှင့် ဗီဒီယို ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှု ထုတ်လွှင့်ခြင်းစနစ် (ပုံမှန်မဟုတ်သော)
စာတန်းထိုး စာတန်းထိုးစနစ်၊ Virtual matting စနစ် (ပုံမှန်မဟုတ်သော)
1. ဗီဒီယို- ထည့်သွင်းမှု- 3G/HD-SDI ထည့်သွင်းမှု 8 အုပ်စု၊ HDMI ထည့်သွင်းမှု2အုပ်စု၊ 1080i60Hz၊ 1080P60Hz၊ 1080i50Hz၊ 1080P50Hz နှင့် အခြားအချက်ပြထည့်သွင်းမှုတို့ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။Built-in HD စာတန်းထိုးစက် ထည့်သွင်းသည့် အင်တာဖေ့စ်၊ အင်တာဖေ့စသည် HDMI သို့မဟုတ် SDI;အထွက်- 3G/HD-SDI အုပ်စုနှစ်စုနှင့် HDMI HD ဗီဒီယိုအထွက်အုပ်စုနှစ်ခု၊ PVW အထွက်အုပ်စုတစ်စုနှင့် PGM အထွက်အုပ်စုတစ်စု၊
2. အသံ- ထည့်သွင်းခြင်း- XLR ဟန်ချက်ညီသော အသံထည့်သွင်းမှုအုပ်စု5ခု၊ LINE နှင့် MIC မုဒ်ကို ပံ့ပိုးပေးထားပြီး တစ်ခုစီတွင် 48V ဖန်တန်ပါဝါခလုတ်၊ RCA(R, L) စတီရီယိုထည့်သွင်းမှု5ဖွဲ့၊ SDI အုပ်စု5ခု၊ HDMI ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံကို ထည့်သွင်းမွမ်းမံထားသည်။ ထည့်သွင်းမှု;အထွက်- XLR ဟန်ချက်ညီသော အသံအထွက်အုပ်စု2ခု၊ RCA(R, L) စတီရီယိုအထွက်အုပ်စု 1 ခု၊ 3.5mm အသံမော်နီတာအထွက်၊
4. စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်- လွတ်လပ်သော 1920×1080 hd ဖန်သားပြင်6ခု၊9လက်မ မျက်နှာပြင်2ခု နှင့်4လက်မ မျက်နှာပြင်4ခု၊ တစ်ခုမှာ 9-လက်မ မျက်နှာပြင် ပြသသည့် PGM တိုက်ရိုက် ဝင်းဒိုး ဖြစ်ပြီး အခြား တစ်ခုမှာ9လက်မ မျက်နှာပြင် PVW အစမ်းကြည့်ရှုခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြတင်းပေါက်၊44-လက်မစခရင်များသည် အသီးသီးထည့်သွင်းထားသော အချက်ပြမှုများကို ပြသသည်;10 စခရင် အပိုင်းခွဲပြသမှု အထွက်ပါရှိသော၊ ပြသမှုရွေးချယ်မှုခလုတ်ကို ပေးဆောင်ပါ၊ အဝင်အချက်ပြမှု 8 ခုနှင့် အထွက်အချက်ပြမှု2ခု အသီးသီးပြသပါ။
5. အတွင်းပိုင်းခေါ်ဆိုမှုစနစ်- ချန်နယ်ရှစ်လိုင်း ဟာ့ဒ်ဝဲလမ်းညွှန်ခေါ်ဆိုမှုစနစ်နှင့် ရှစ်လိုင်းလမ်းညွှန်ချက်စနစ်စနစ် TALLY သည် တစ်ဦးချင်းခေါ်ဆိုမှု၊ ခေါ်ဆိုမှုအားလုံးနှင့် ချန်နယ်တစ်ခုစီရှိ ခေါ်ဆိုမှုအတွက် အသံတိတ်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် ခေါ်ဆိုမှုရွေးချယ်မှုခလုတ်ရှစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
6. အသံပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ခြင်း- တပ်ဆင်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောသမမွှေစက်၊ အန်နာရောလ် ရောစပ်စက်နှင့် အသံနှောင့်နှေးမှု၊ အသံကို ထည့်သွင်းပြီး မြှုပ်နှံထားခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် အော်ဒီယိုနှင့် အန်နာလော့အသံ၊ SDI အုပ်စု5ဖွဲ့၊ HDMI ဒစ်ဂျစ်တယ် ပေါင်းထည့်မထားသော အသံ၊ XLR ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မိုက်ခရိုဖုန်း5ဖွဲ့ သို့မဟုတ် မျှတသောအသံ၊ 48V illusion power supply အုပ်စု5ခုနှင့် RCA (R, L) စတီရီယို အော်ဒီယို ဟာ့ဒ်ဝဲ ရောစပ်စက်5ဖွဲ့ပါရှိသော၊ ရောနှောထားသော စက်တွင် အသံပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့် အသံလုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် အုပ်စု7ဖွဲ့၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ၏ အသံအတိုးအကျယ်ကို ထိန်းချုပ်ရန် အသံအတိုးအကျယ် ချိန်ညှိမှု fuser7အုပ်စု၊ analog အော်ဒီယိုနှင့် ပင်မအထွက်အသံ အသီးသီး၊ XLR ဟန်ချက်ညီသော အထွက်အုပ်စု2ခု၊ RCA (R, L) စတီရီယို အထွက်အုပ်စု 1 ခု၊ HDMI ဒစ်ဂျစ်တယ် အသံ မြှုပ်သွင်းထားသော အထွက်အထွက် အုပ်စု2အုပ်စုနှင့် SDI ဒစ်ဂျစ်တယ် အသံ မြှုပ်သွင်းထားသော အထွက်အုပ်စု2အုပ်စု၊ တပ်ဆင်ထားသော အော်ဒီယို ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှုစနစ်၊ အသံနှင့် ပန်းချီများ၏ တိကျသော ထပ်တူပြုမှုကို ရရှိစေရန် ဟာ့ဒ်ဝဲခလုတ်ဖြင့် အသံ၏အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိပါ။
7. ကင်မရာ PTZ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်- ကင်မရာတစ်ခုစီ၏ တွန်း၊ ဆွဲ၊ လှိမ့်၊ နှိုက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် အသီးသီး အသီးသီး တပ်ဆင်ထားပြီး ဖြတ်လမ်းခလုတ်9ဖွဲ့ကို တပ်ဆင်ထားပြီး စက်တစ်ခုစီတွင် ဖြတ်လမ်းခလုတ်များ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော ခလုတ်9ခုနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့် ဆက်တင်ခလုတ်များ အုပ်စု2ခု၊ တပ်ဆင်ထားသော အနေအထား 100 ကို နားလည်နိုင်သည်၊ ကင်မရာလိပ်စာရွေးချယ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ဟာ့ဒ်ဝဲလ် rotary ကုဒ်ဒါကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ကင်မရာလက်စွဲနှင့် အလိုအလျောက်တိကျမှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်၊ အိမ်တွင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန် ကင်မရာအဖြူရောင်ချိန်ခွင်လျှာ၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အလင်းဝင်ပေါက်၊ အရောင်၊ အလင်းအမှောင်စသည်တို့ကို သင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပြင်ပပစ်ခတ်မှုလိုအပ်ချက်များ;
8. မှတ်တမ်းတင်ခြင်းစနစ်- တပ်ဆင်ထားသည့် 4:2:0 ကုဒ်မှတ်တမ်းစနစ်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဘောင်နှင့် အဆက်မပြတ်ကုဒ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းရရှိစေရန်၊ ဟာ့ဒ်ဝဲအသံဖမ်းစနစ်သည် microSD /TF ကတ်၊ USB နှင့် အခြားသိုလှောင်မှုကြားခံများကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ TF Card၊ U disk နှင့် မိုဘိုင်း hard disk မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အသံသွင်းဖိုင်ဖော်မတ်သည် MP4 ဖြစ်ပြီး၊ nonlinear တည်းဖြတ်စနစ်သို့ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းနိုင်သည်။
9၊ Built-in Wifi- WLAN ပင်မသတ်မှတ်ချက်များ၊ PHY- 2.4 band နှင့် 5G band 2X2 ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။MAC- IEEE 802.11d /e/h/ I /k/w ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။20M၊ 40M နှင့် 80M တို့၏ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။IEEE 802.11b /g/n/ AC ပံ့ပိုးမှု။ဂီယာပါဝါ: 11B@16dbm;11 ဂရမ် @ DBM;11 n @ 13 DBM;MCS9 @ 13 DBM;2.4g အာရုံခံနိုင်စွမ်း (40MHz) : -80dbm @rate MCS 0;-68dbm @rate MCS 5;-64dbm @mcs7၊ 5G ဧည့်ခံအာရုံခံနိုင်စွမ်း (40MHz) : -80dbm @rate MCS 0;-68dbm @rate MCS 5;- 64 DBM @ MCS7;
10၊ တပ်ဆင်ထားသော အသံနှင့် ဗီဒီယို ကုဒ်ရေးစနစ်- ဗီဒီယို ကုဒ်ရေးခြင်း H.264၊ အော်ဒီယို ကုဒ်ရေးခြင်း AAC၊ coding နှောင့်နှေးမှု ≤67ms၊ ဗီဒီယို ကုဒ်ရေးနှုန်း 256Kbps ~ 25Mbps ချိန်ညှိနိုင်သော၊ အော်ဒီယို ကုဒ်ရေးနှုန်း 32Kbps ~ 512Kbps၊ AAC ကုဒ်သွင်းမှု 64Kbps၊
11. တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ပရိုတိုကော- FMS တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ RTMP တွန်းအားပေးခြင်းနှင့် RTMP ဝန်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်မှုလိပ်စာ၊ တွန်းနှုန်းနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုစသည်တို့ကို အဝေးမှသတ်မှတ်နိုင်သည့် APP တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုဆက်တင်စနစ် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
12၊ ဂီယာနှင့်ထိန်းချုပ်မှု- စံ 3G/HD-SDI ထည့်သွင်းမှု၊ အင်တာဖေ့စ် BNC အမျိုးအစား၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကာကွယ်မှုပါရှိသော BNC မျက်နှာပြင်၊ ပေါင်းစပ်ချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်၊ 75-ω coaxial ကေဘယ်လ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အချက်ပြငါးခုကို ထုတ်လွှင့်မှုအောင်မြင်ရန် ၎င်းတို့၊ ကင်မရာ full HD 3G/HD-SDI ဗီဒီယိုအချက်ပြမှု + ကင်မရာနှင့် XLR အသံအချက်ပြမှု + ကင်မရာပါဝါထောက်ပံ့မှု + ကင်မရာ PTZ ထိန်းချုပ်မှု + လမ်းညွှန်သတိပေးချက် TALLY ။ကင်မရာနှင့် လမ်းညွှန်လက်ခံသူကြားရှိ အချက်ပြမှုများ၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပါဝါပို့လွှတ်မှုအားလုံးကို ကေဘယ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ပြီးမြောက်နိုင်သည်၊ ယင်းသည် မိုဘိုင်းရိုက်ကူးမှု၏ ဝါယာကြိုးပြဿနာအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည့်
13၊ တပ်ဆင်ထားသော အလိုအလျောက် ထုတ်လွှင့်မှု ထိန်းချုပ်မှု ယူနစ်၊ အလိုအလျောက် အသိဉာဏ်ရှိသော ဗီဒီယို ထုတ်လွှင့်မှု ထိန်းချုပ်မှု၊ တစ်ပိုင်း အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှု၊ လက်စွဲ ထိန်းချုပ်မှု၊ အသုံးပြုသူများ လွတ်လပ်စွာ ပြောင်းရန် မုဒ်သုံးမျိုး၊ မှတ်တမ်းခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် သင်သည် မည်သည့် စွက်ဖက်မှုမှ မရှိဘဲ မှတ်တမ်းတင်ပြီး တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။
14၊ အခင်းအကျင်းပြောင်းခြင်းနည်းဗျူဟာ- ဆရာအနီးကပ်၊ ဆရာမြင်ကွင်းကျယ်၊ ကျောင်းသားအနီးကပ်၊ ကျောင်းသားမြင်ကွင်းကျယ်၊ ကျောက်သင်ပုန်းအနီးကပ်နှင့် ကွန်ပျူတာစခရင်ကို ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ကူးပြောင်းခြင်း နှင့် လက်စွဲခလုတ်များကို သင်ကြားခြင်းအကြား အလိုအလျောက်ပြောင်းခြင်း၊ မတူညီသော ကူးပြောင်းခြင်းဗျူဟာများကို လိုအပ်ချက်အလိုက် သတ်မှတ်နိုင်သည် ( စမတ်ကင်မရာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။)
ယခင်- KD-BC-4H အရောင်းရဆုံး တိုက်ရိုက်အသံသွင်းခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် တွန်းလွှင့်ခြင်း အားလုံးကို တစ်ခုတည်းသော Virtual Studio အစိမ်းရောင် စခရင်သော့စနစ်
နောက်တစ်ခု: KD-BC-8HN စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် အရည်အသွေးမြင့် တာရှည်ခံ 17.3-လက်မ အိတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာနှင့် အသံဖမ်းစက်
KD-BC-4H အရောင်းရဆုံး တိုက်ရိုက်အသံသွင်းခြင်း၊ အသံလွှင့်ခြင်း...
KD-BC-8HN စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသော အရည်အသွေးမြင့်...
KD-BC-8L စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသော အရည်အသွေးမြင့် A...
Studio အတွက် KD-BC-8UL 4K ဒါရိုက်တာ Switcher၊ တိုက်ရိုက်...